AutoSleep, ingori yakakwana kuongorora yako kurara | IPhone nhau
Kurara Auto, ingori yakakwana yekutarisa kurara kwako
Kuongorora kurara ndechimwe chinhu chekuwedzera kufarira kune vanopfeka vanoshandisa kazhinji, uye iri rimwe remabasa anoverengerwa mabhandi echiwoko equantizer. Iyo Apple Watch haina kuisanganisira seyakajairwa pakati pemabasa ayo, asi ine sensors zvese zvinodiwa kuti uzviite zvirinani pamwe nemamwe mabhengi pamusika anoisanganisira, uye nekutenda kuApp Store yatinogona kuwana mafomu mazhinji anoita basa iri.
Pakati pavo vese, uye mushure mekuyedza repertoire yakanaka, ini ndinosarudza AutoSleep, chishandiso chinopa ruzivo rwakawanda pamusoro pehope dzako uyezve chichizviita nenzira yakapfava zvekuti iri nyore pabasa iri uye kuti ndinoda kuongorora zvakadzama hunhu hwainaro hunosiyanisa kubva kune vamwe.
1 Iwe haufanire kuita chero chakakosha
2 Yakarurama kwazvo uye yakazara data
3 Iyo yakapusa uye yakajeka gadziriso
Iwe haufanire kuita chero chakakosha
Ndiyo nzira yakanakisa yekupfupisa zvinoita AutoSleep. Mune Screenshots yemusoro unogona kuona huwandu hweruzivo iyo yaunokupa ino application, uchishandisa ma sensors kwete chete eApple Watch yako, asi ye iPhone yako. Zvakanaka, irwo ruzivo rwese rwunounganidzwa pasina kuita chero chakakosha, kana zvirinani iwe usingaone. Haufanire kuzvitaurira kana uchizorara, haufanire kusiya iPhone yako pamubhedha wako paunenge wakarara, haufanire kubaya bhatani kana chero chinhu chakadai.: Kurara Auto kunozongoerekana yaona paunenge uchizorara, kunyangwe iko kumborara zvishoma kwaunopa kana wapedza kudya masikati pasofa pamba. Sezvazvinoita? Uchishandisa zvakapusa asi zvinoshanda kwazvo algorithms.
AutoSleep inosanganisa iyo ruzivo kubva kune yako iPhone uye iyo yeApple Watch kuti uone kuti waenda kunorara. Uye zvakare, iwe unogona kuratidza yako akajairwa nongedzo kufambisa basa. Sezvo iwe uchipfeka yako Apple Watch pachiuno chako kana ichiona kuti moyo wako unodonha, kuti haufambi kufamba, uye kuti hausi kushandisa yako iPhone, inofungidzira kuti wakarara. Paunotanga kufamba mangwanani zvinofungidzira kuti wamuka. Saka zviri nyore asi zvinobudirira.
Yakarurama kwazvo uye yakazara data
Paunoverenga izvi izvo zvandichangobva kukuudza, iwe unobva wapokana nekurongeka kwedata iri. Asi kana iwe uchizviedza kwemazuva mashoma uye woona kuti zvinogadza iyo nguva yaunorara uye kana iwe unomuka, kunyangwe nzara iyo chinguva chekakarara kadiki kaungaisa pasofa, ipapo kusahadzika kunopera.
Ruzivo irwo rwunopa rwakakamurwa mumatanho akasiyana: Clock, ine chiratidzo chepasirese chezuva rako uye izvo zvawakarara pairi; Hunhu, nemagirafu uye zvikamu zvinokuzivisa nezvehunhu hwehope dzako; Zuva, iine data rakanyatso nyatso padanho remwoyo wako, mafambiro, nezvimwe. Uye chakanakisa pane zvese ndechekuti inoita izvi neruzivo iyo iyo Apple Watch inounganidza yega, pasina chikonzero chekuti iwe uise chero application pane wachi., iyo zvakare inodzivirira yakawandisa bhatiri kushandiswa. Iyo app yeApple Watch inosarudzika uye inongodzidzisa chete, kutaura chokwadi handina iyo yakaiswa.
Iyo yakapusa uye yakajeka gadziriso
Icho chimwe cheakakosha mapoinzi ekushandisa, kumisikidza kwayo kuri nyore. Kana iwe wakamboedza chikumbiro chakafanana, unogona kunge wakaziva kuti iyo data yainokumbira yakaoma kwazvo, pasina kugadzirisa kune ako maitiro ezuva nezuva, kana akaomesesa, usinganyatsonzwisisa izvo chaizvo zvavanoda kuziva. AutoSleep ine yekumisikidza mubatsiri mune mune akati wandei akanyatsotsanangurwa matanho iwe uchabatsira iyo application kuziva ako maitiro zvakanaka uye inogona kunyatsoita zviyero zvako.
Iko kunyorera kunokutendera kuti utarise kurara kwako usina kutakura yako Apple Watch, kunyangwe zviri pachena kuti data rakaunganidzwa nenzira iyi rakanyanya kuderera. Nzira yekurara newachi uye kuti bhatiri rinogara zuva rese? Zvakanakisa kugadzirisa ako maitiro ezuva nezuva zvishoma, kuchaja wachi usati warara uye uchangomuka iwe uchinge wagadzirira kuenda kubasa., uye saka unogona kuipfeka pasina matambudziko panguva yehusiku iwe uchakarara. Neaya madiki madhiri maviri pazuva iwe unenge uine kuzvitonga kwakakwana kuti ugone kushandisa wachi mukati mehusiku.
Kurara Auto. Tarisa kurara kwako4,49 €
Iko kunyorera hakusi kwemahara, uye kunyangwe chiri chokwadi kuti pane yakanaka repertoire yemahara mafomu ayo anofungidzirwa kuti anopa zvakafanana, Kana iwe ukayedza, pamusoro pezvose, iwe unenge wagutsikana nekureruka kwekushandisa uye kuomarara kwezviyero zvayo. Uye zvakare, mugadziri wayo anoramba achigadzirisa nezvinovandudzwa, saka rutsigiro rwacho runopfuura rwechokwadi. Izvo zvakakodzera kubhadhara iyo € 2,99 iyo inodhura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kurara Auto, ingori yakakwana yekutarisa kurara kwako
Madzimambo akandiunzira iwo uyu modhi uye ndinofara nawo kwazvo kunze kwemumwe wenyaya:
Ini handina kukwanisa kuibatanidza nechero chinhu chebluetooth, kusanganisira Beats.
Wakave nedambudziko rakafanana. Ini ndataura neApple technical rutsigiro uye zvese zvavakandiudza ndezvekuti wachi chinhu chakanyanya kusimba chine bhuruu yekubatanidza uye inogona kusashanda nemahedhifoni kubva kune mamwe mabrand.
Sarudza paunenge uchida Low Power Mode kuti ushande pane yako iPhone (Tweak)